Toe-javatra mahazatra sy efa mpiseho ny fahaterahana ka matetika no tsy tsapantsika amin'ny fahafenoany ny maha-zava-mahatalanjona izany. Alaivo sary an-tsaina i Eva mitrotro an'i Kaina kely. Araka ny hevitrao, mety ho nanao ahoana ny fihetsehampony raha nandray ny zaza tamin'ny voalohany indrindra? Ahoana ny amin'ireo fiovana marobe tsapany teo amin'ny vatany raha nitombo tao an-kibony i Kaina? Nanao ahoana ny fahoriana tsapany rehefa niteraka azy? Inona no tao an-tsainy raha nijery ny mason'ilay zaza tamin'ny voalohany indrindra? Nitovy tamin'i Adama sy i Eva izy, saingy kely dia kely ary marefo. Ahoana indray ny amin'i Saraha, izay niteraka tamin'ny fahasivifolo taonany? Inona no fihetsehampony rehefa nijery ny endrik'i Isaka zanany izy? Isaka izay midika hoe fihomehezana. Tsy isalasalana fa feno fifaliana tokoa ny hehin'i Saraha isaky ny manonona ny anarany izyl Nangataka zazalahy tamin'Andriamanitra nandritra ny fotoana lava i Hana ka nomen'Andriamanitra an'i Samoela. Izao no nolazainy: hahazoako ity zazalahy ity no nivavahako; dia nomen'i Jehovah ahy izay nangatahiko taminy." - 1 Sam. 1:27. Teo koa i Maria izay nanjary renim-pianakaviana raha mbola tanora tokoa; azo antoka ny fitiavana lalina tsapany raha nitrotro ilay Zanak'Andriamanitra teny an-tsandriny.
Tsy ny olon-drehetra no manana ny tombontsoa ho ray aman-dreny sy ny andraikitra mifandraika amin'ny fitaizana. Mandritra ity herinandro ity isika dia hijery ireo fanandraman'ny fitaizana: ny fifaliana azo, ny tahotra ary ireo olana manokana mety ho hita eo am-pitaizana ny zanaka ho an'Andriamanitra.